Kwenziwe ngentando 5V ishaja PCBA Factory, Abakhiqizi futhi abahlinzeki - Dongguan Changsen Electronic Technology Co., Ltd.
I-Bluetooth Headset engenantambo
Ishaja Power Circuit Board
5V ishaja PCBA
Ikhaya > Imikhiqizo > 5V ishaja PCBA
Ishaja yefoni yeselula ye-USB
Ishaja yefoni yeXiaomi
Amapharamitha wehedisethi angenantambo we-Bluetooth
Amapharamitha Weshaja Yemoto
I-PCBA yethulwaIzinikezelwe ngokunemba okuphezulu emaceleni omabili, amabhodi wesekethe aphrintiwe angaphezulu, isampula nedizayini encane yamaqoqo, ukuthuthukiswa, ukukopisha ibhodi, ukukhiqizwa kwe-BOM, ukuhlolwa kokusebenza. Izinto ze-elekthronikhi, amasekhethi ahlanganisiwe, isixubho samazinyo kagesi ,, ikhawuntari, irobhothi eshanela, iphaneli yokulawula, imodyuli ye-bluetooth, imodyuli yemodyuli, imodyuli yezwi, izipikha zemultimedia, izinto zasekhaya, ukwakhiwa kwehardware ye-elekthronikhi nokuthuthukiswa kobuchwepheshe besoftware, ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo nemishini, umqondo wokuvela, ukubukeka, uhlelo lwesakhiwo kanye nesoftware kanye nesikimu sehadiwe, okumbalwa, kufaka phakathi i-elekthronikhi, amapulangwe, ukuhlolwa, ukuhlangana nezinye izinsizakusebenza zabathengi,
5V18W ishaja PCBA
5V18W ishaja PCBA I-1) Unjiniyela usebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi ipharamitha yokukhipha kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi ekubangeleni impilo yomkhiqizo. 2) Ngokubheka ukuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekayo, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, liphinde liqinisekise ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi le-fuse lokuzenzakalelayo, ukuvikela okuzenzakalelayo okukhulu noma okufishane okuzenzakalelayo, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha. 3) Ishaja isetshenziswa kwimikhiqizo ye-elekthronikhi neyedijithali njengamaselula.
5v2.5W ishaja PCBA
5v2.5W ishaja PCBA I-1) Unjiniyela usebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi ipharamitha yokukhipha kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi ekubangeleni impilo yomkhiqizo. 2) Ngokubheka ukuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekayo, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, liphinde liqinisekise ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi le-fuse lokuzenzakalelayo, ukuvikela okuzenzakalelayo okukhulu noma okufishane okuzenzakalelayo, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha. 3) Ishaja isetshenziswa kwimikhiqizo ye-elekthronikhi neyedijithali njengamaselula.
5V multi-port ishaja PCBA
5V ombaxambili USB ishaja PCBA
I-5V kabili ishaja ye-USB PCBA1) Unjiniyela usebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi ipharamitha yokuphuma kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi kungadala umonakalo empilweni yomkhiqizo. 2) Ngokubheka ukuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekayo, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, liphinde liqinisekise ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi le-fuse lokuzenzakalelayo, ukuvikela okuzenzakalelayo okukhulu noma okufishane okuzenzakalelayo, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha. 3) Ishaja isetshenziswa kwimikhiqizo ye-elekthronikhi neyedijithali njengamaselula.
5V single-port ishaja PCBA
I-5V single-port charger PCBA1) Injiniyela isebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi ipharamitha yokuphuma kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi kungadala umonakalo empilweni yomkhiqizo. 2) Ngokubheka ukuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekayo, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, liphinde liqinisekise ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi le-fuse lokuzenzakalelayo, ukuvikela okuzenzakalelayo okukhulu noma okufishane okuzenzakalelayo, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha. 3) Ishaja isetshenziswa kwimikhiqizo ye-elekthronikhi neyedijithali njengamaselula.
5V ishaja esheshayo PCBA
5V ishaja esheshayo PCBA I-1) Unjiniyela usebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi ipharamitha yokukhipha kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi ekubangeleni impilo yomkhiqizo. 2) Ngokubheka ukuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekayo, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, liphinde liqinisekise ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi le-fuse lokuzenzakalelayo, ukuvikela okuzenzakalelayo okukhulu noma okufishane okuzenzakalelayo, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha. 3) Ishaja isetshenziswa kwimikhiqizo ye-elekthronikhi neyedijithali njengamaselula.
Thenga i- 5V ishaja PCBA yethu ingajabulela insizakalo esezingeni eliphakeme, uvune intengo ephansi yemikhiqizo yekhwalithi. Inkampani yethu ingumkhiqizi oqeqeshiwe nomhlinzeki we- 5V ishaja PCBA, sinikezela ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso, eChina inezinto zokusebenza ezinhle zokukhiqiza kanye nobukhomanisi. Ngibheke phambili ekuvakasheni kwakho ~
Ikheli: Igumbi 302, 3 / F, 35 Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City
Ungaxhumana nathi nganoma yimiphi imibuzo. Intengo yethu kanye nensizakalo yethu kuzokugculisa ~
Wazi kangakanani ngamahedisethi we-Bluetoothï¼Ÿ2020/10/16
Ihedsethi ye-Bluetooth ubuchwepheshe be-bluetooth obusetshenziswa kumahedsethi angenazandla avumela umsebenzisi ukuthi akhulume kalula nganoma iyiphi indlela ngaphandle kokubambeka ocingweni olucasulayo. Amahedisethi e-Bluetooth abe yithuluzi elihle lokukhiqiza kubantu bebhizinisi elihambayo kusukela laqala ukusebenza.
Izeluleko ezinhlanu zokukhetha ihedisethi ye-Bluetooth.2020/10/16
Okokuqala, hlola ukuhambisana Uma ukhetha ihedsethi ye-Bluetooth, umbuzo obaluleke kakhulu ukuthi ngabe ifoni iyahambisana namahedsethi.
@I-copyright 2020-2021 CHANGSEN CO., Ltd